I-GW PRECISION TWIN ISHEETER YENKOSA D150/D170/D190
I-GW PRECISION TWIN ISHEETER YENKOSA D150/D170/D190
I-GW-D i-twin knife sheeter ithatha uyilo oluphambili lweesilinda zamawele ezijikelezayo eziqhutywa ngokuthe ngqo ngamandla aphezulu e-AC servo motor ngokuchaneka okuphezulu kunye nokusikwa okucocekileyo.I-GW-D yayisetyenziselwa ukusika ibhodi, i-kraft paper, i-Al laminating paper, i-metalized paper, i-art paper, i-duplex njalo njalo ukuya kwi-1000gsm.
I-1.19 "kunye ne-10.4" isikrini sokuchukumisa kabini kwiyunithi yokusika kunye nokulawulwa kweeyunithi zokuhambisa zisetyenziselwa ukuseta kunye nokubonisa ubungakanani beshiti, ukubala, ukusika isantya, ukugqithiswa kokuhanjiswa, kunye nokunye.Ulawulo lwesikrini sokuthintela lusebenza ngokubambisana ne-Siemens PLC.
I-2.Iyunithi yokusika i-TWIN KNIFE ine-synchronic rotary cut knife njenge-scissors kwizinto eziphathekayo ukwenza ukusika okucolileyo kunye nokuchanekileyo kwephepha ukusuka kwi-150gsm ukuya kwi-1000gsm.
Olunye ulwazi lwemveliso
Ngokutsho technics imveliso GW kaThixo, Umatshini ikakhulu esetyenziselwa sheeting iphepha kwi Paper Mill, Printing House kunye etc, ikakhulu inkqubo kuquka: Ukukhulula—Cutting—Ukuhambisa—Ukuqokelela,.
I-1.19 "kunye ne-10.4" i-screen touch screen kwiyunithi yokusika kunye nokulawulwa kweeyunithi zokuhambisa zisetyenziselwa ukuseta kunye nokubonisa ubungakanani beshiti, ukubala, ukusika isantya, ukugqithiswa kokuhanjiswa, kunye nokunye.Ulawulo lwesikrini sokuthintela lusebenza ngokubambisana ne-Siemens PLC.
I-2.Ibhanti lesantya esiphezulu liqhutywa yi-British CT high-power servo ukuqinisekisa ukuphuma kwephepha eligudileyo.Isakhiwo sokukhupha inkunkuma ye-pneumatic sisusa inkunkuma yephepha kwaye siphucula ukusebenziseka lula.Isixhobo se-gas spring belt tensioning device siqinisekisa ukuba ibhanti ngalinye linokuqhuba kakuhle.
I-3.Iyunithi yokusika i-TWIN KNIFE ine-synchronic rotary cut knife njenge-scissors kwizinto eziphathekayo ukwenza ukusika okucolileyo kunye nokuchanekileyo kwephepha ukusuka kwi-150gsm ukuya kwi-1000gsm. ukusuka UK, amkele umsantsa-free uyilo lwesakhiwo gear, kunye GW kaThixo 5 axis high ukuchaneka CNC umatshini ukuma main kwisiqwenga esinye.ukuphelisa ngokufanelekileyo i-gap yokugubha kweemela ezimbini, ukuqinisekisa ubomi be-blade kunye nokuchaneka kokusika.eqinisekisa ukuzinza kwesixhobo somzimba ngexesha lokusebenza ngesantya esiphezulu.
4.Iisethi ezintathu ze-heavy duty pneumatic slitters ziqinisekisa i-slitting ezinzileyo kwaye ecocekileyo.Uhlengahlengiso lobubanzi bokusika oluqhutywa ngumbane oluzenzekelayo.(* Ukhetho).
I-5.I-Dual shaftless back stands ene-web tension controls kunye ne-pneumatic brake units zisemgangathweni.
6.Isistim sokuthambisa izixhobo zokutshiza siqinisekisa ukuba iigiya zithanjiswe ngokupheleleyo ngexesha lokusebenza.Ukwandisa ngokufanelekileyo ubomi benkonzo yomatshini.
Eyona Parameter yobuGcisa
Umzekelo GW D150/D170/D190
Uhlobo lokusika Imela ephindwe kabini, iblade ephezulu kunye nentsimbi esezantsi yokusika ukujikeleza
Uluhlu lobunzima bephepha 150-1000 GSM
Umthamo womthwalo wokuma we-reel: Iitoni ezi-2
Idayamitha yeReel Ubukhulu 1800mm (71")
Ukusika Ububanzi Ubukhulu 1500/1700/1900mm (66.9")
Sika uluhlu lobude Min.400-Max.1700 mm
Num.yokusika imiqulu Imiqulu emi-2
Ukusika ukuchaneka ±0.15mm
Max.Isantya sokusika 400cuts/min
Max.Ukusika isantya 300m/min
Ukuphakama kokuhanjiswa 1700mm(incl.pallet)
I-Voltage AC380V/220Vx50Hz 3ph
Amandla enjini aphambili: 64kw
Amandla onke 98kw
Isiphumo Imveliso yokwenene ixhomekeke kwizinto eziphathekayo, kunye nobunzima bephepha, kunye nenkqubo yokusebenza ngokufanelekileyo
1. Isikhundla esiphindwe kabini sengalo yokuvula ingalo yokukhulula
2. Ukupholisa umoya kwepneumatic disc brake
3. Uxinzelelo oluzenzekelayo olusekwe kwidayamitha ye-reel
4. Inkqubo ye-decurler elawulwa yi-Servo
5. Isikhokelo sewebhu se-EPC
6. Iisilinda zemela ezingamawele amabini
7. Iiseti ezintathu zePneumatic Slitters
8. Ibha yeAnti-Static
9. Ngaphandle kwesondlo kunye necandelo elidlulayo
10. Iyunithi yokuhanjiswa kweHydraulic 1700mm
11. Ukubala ngokuzenzekelayo kwaye ucofe isifaki
12. Isikrini sokuchukumisa kabini
13. I-JIJIN PLC, UK CT Servo Driver, Schneider inverter, izinto zombane ezivela ngaphandle
14. Ukukhupha isango
Ingalo ejikajikayo ekwisithuba esimbaxa-mbili sokukhulula ingalo yokukhulula isitendi esikumgangatho osezantsi kunye nenkqubo yetroli.
Umoya opholileyo wepneumatic controlled disc brakes kwingalo nganye.
Isilawuli soxinzelelo oluzenzekelayo lukunika ulawulo olulungileyo kuxinzelelo ngakumbi kwi-reel encinci.
4. Isikhokelo sewebhu se-EPC
Isivamvo se-EPC esidityaniswe "nesakhelo sojingi" esizimeleyo sivumela ubuncinci bomphetho wokunquma wewebhu, kunye nolawulo olungqongqo lomphetho wewebhu kuyo yonke ireel ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
5. Servo controlled decurler inkqubo
Inkqubo yokulawula i-Servo elawulwa yi-decurler inokubona ngokuzenzekelayo ububanzi bephepha kwaye ilungelelanise amandla okubuyisela, i-coefficient ingaphinda ibekwe yi-gsm yezinto ezahlukeneyo, kwaye amandla okubuyisela aya kulandela isethi yezinto kunye nobubanzi.
6. I-Twin Knife eqhutywa yi-servo motor
a.I-twin helical knife iqinisekisa i-edge ebukhali kakhulu kwaye icocekileyo yokusika ngokuchaneka okuphezulu
b.Incakuba yenziwe nge-alloy ekhethekileyo st eel SKH.9 enobomi obude kunye nokugcinwa lula.Irola yamawele amawele kunye nerola yokutsala iphepha ziqhutywa yi-servo motor eyahlukileyo.
Umsebenzi onzima we-pneumatic slitters uqinisekisa ukuzinza kunye nokucoceka kwe-slitting.
9. Indawo yokutya kunye necandelo elihambayo
a.Isantya esidityaniswe ngokupheleleyo phakathi kwesantya esiphezulu sokutya kunye necandelo leteyipu edibeneyo ukugcina ishingle efanelekileyo.
b.Iyunithi edityanisiweyo enexabiso elidityanisiweyo elilungelelanisiweyo kunye ne-jam-stop sensor.Iphepha elinye lingamiselwa.
Ubude bokusika, ubuninzi, isantya somatshini, isantya esinqunyiwe sinokuboniswa kwaye sibekwe ngesikrini sokuchukumisa.
8. I-Anti-Static Bar
10. Iyunithi yokuhanjiswa kwe-hydraulic
11. Ukubala ngokuzenzekelayo kwaye ucofe faka
13. I-PLC eyilwe ngokwakho, i-Schneider inverter, i-CT Servo motor, i-FUJI servo driver
2. Mechanical-ukwandisa chuck
3. Ukulungelelaniswa kobubanzi bokusika ngokuzenzekelayo
4. Utshintsho lwephalethi oluzenzekelayo
5. Ukuhanjiswa ibhanti ephezulu
6. Isitaki esingayekiyo
7. Ukulandela ikhesa
8. Ukulawulwa kokhuseleko okungafunekiyo kunye nenkqubo yokhuseleko lonxibelelwano
5.Ukuhanjiswa kwebhanti ephezulu
Iswitshi yemagnethi (iingcingo ezi-2)
Ukutshintsha okusondele (NPN)
I-Solid State Relay (40A)
AKUKHO imodyuli yoqhagamshelwano
Umqhubi we-Servo 0.4kw
Ukutshintsha unikezelo lwamandla
Ukutshintshela umtshina woxinzelelo lweHydraulic
I-Servo motor (CT 18.5kw)
I-Servo motor (CT 64kw)
I-Servo motor (CT 7.5kw)
I-centrifugal medium-pressure blower (0.75kw, 2800rpm)
I-D150 eChanekileyo iTwin Knife Sheeter Layout
Ngentsebenziswano neqabane elikwinqanaba eliphezulu kwihlabathi, iQela laseGuowang (GW) lingabanini benkampani yeLinge eliHlangeneyo neqabane laseJamani kunye neprojekthi ye-OEM yehlabathi ye-KOMORI.Ngokusekwe kwitekhnoloji ephucukileyo yaseJamani neyaseJapan kunye namava angaphezulu kweminyaka engama-25, iGW isoloko ibonelela ngesona sisombululo silungileyo nesisebenzayo emva kokushicilela.
I-GW yamkele isisombululo semveliso ephucukileyo kunye nomgangatho wolawulo we-5S, ukusuka kwi-R&D, ukuthenga, ukwenza oomatshini, ukudibanisa kunye nokuhlola, yonke inkqubo ilandela ngokungqongqo umgangatho ophezulu.
I-GW ityala imali eninzi kwi-CNC, ngenisa i-DMG, i-INNSE- BERADI, i-PAMA, i-STARRAG, i-TOSHIBA, i-OKUMA, i-MAZAK, i-MITSUBISHI njl njl ukusuka kwihlabathi liphela.Kuphela ngenxa yokuba usukela umgangatho ophezulu.Iqela elomeleleyo le-CNC lisiqinisekiso esiqinileyo somgangatho weemveliso zakho.Kwi-GW, uya kuziva "ukusebenza kakuhle kunye nokuchaneka okuphezulu"
Ngaphambili: I-GW PRECISION SHEET CUTTER S140/S170
Okulandelayo: S-28E Three Knife Trimmer Machine For Book Cut
I-GW PRECISION SHEET CUTTER S140/S170